Ch 8 Asan'ny Apostoly – 2trondro
Home / Baiboly / Asan'ny Apostoly / Ch 8 Asan'ny Apostoly
8:1 Ary tamin'izany andro izany, nitranga lehibe nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema. Ary izy rehetra niparitaka nanerana ny faritr'i Jodia sy Samaria, afa-tsy ny Apôstôly.
8:2 Fa ny olona matahotra an'Andriamanitra izay hisian'ny Stefana fandevenana, ary dia nanao fisaonana lehibe ny azy.
8:3 Ary Saoly dia nametra fako ho an'ny Fiangonana amin'ny alalan'ny miditra nanerana ny trano, ary mitaritarika lasa lehilahy na ny vehivavy, ary manao azy ireo am-ponja.
8:4 Noho izany, ireo izay efa niparitaka no nandeha manodidina, filazantsara ny Tenin'Andriamanitra.
8:5 I Filipo, midina ho any an-tanàna any Samaria, nitory an'i Kristy ho azy ireo.
8:6 Ary ny vahoaka nihaino tsara sy niray saina amin 'ireo zavatra izay efa lazaina ny Filipo, ka dia nijery ny famantarana izay efa nisy hanatontosa.
8:7 Ho an'ny maro amin'izy ireo nanana fanahy maloto, ary, niantso tamin'ny feo mahery, ireo nandao azy.
8:8 Ary maro ny mararin'ny paralysisa sy ny mandringa no sitrana ny.
8:9 Noho izany, nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray atao hoe Simona, izay efa teo aloha ny ody amin'izany tanàna, mamitaka ny olona tany Samaria, milaza ny tenany ho olona iray lehibe.
8:10 Ary ireo rehetra izay te hihaino, na ny kely na ny lehibe, dia nanao hoe:: "Indro ny herin'Andriamanitra, izay atao hoe hery lehibe. "
8:11 Ary izy ireo hihaino azy, satria, mandritra ny fotoana ela, efa voafitaka azy ny majika.
8:12 Na izany aza tena, indray mandeha efa nino an'i Filipo, izay filazantsara ny fanjakan 'Andriamanitra, na lehilahy na vehivavy dia natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
8:13 Ary Simona koa mba nino koa sy, rehefa natao batisa, dia nanaraka ny Filipo. Ary ankehitriny, mahita koa ny lehibe indrindra ho famantarana sy fahagagana nanao, dia talanjona sy gaga.
8:14 Ary nony ren'ny Apostoly tany Jerosalema izay efa reny fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka an'i Petera sy Jaona ho azy ireo.
8:15 Ary nony efa tonga, dia nivavaka ho azy ireo, mba olona mba handraisany ny Fanahy Masina.
8:16 Fa tsy mbola tonga akory eo aminy, satria izy ireo ihany no natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
8:17 Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina.
8:18 Fa Simona, nony nahita fa, ny fametrahan-tanana 'ny Apôstôly, ny Fanahy Masina nomena, dia nitondra vola homena azy,
8:19 nanao hoe:, "Omeo hery ahy io koa, ka dia ho an'izay dia hametrahako tanana, mba handray ny Fanahy Masina. "Fa hoy Petera taminy::
8:20 "Aoka ny vola miaraka aminareo eto fahaverezana, fa efa nataony fa fanomezana avy amin'Andriamanitra mba nanana ny vola.
8:21 Tsy misy ampahany na ny toerana ho anareo ny amin'izany zavatra izany. Fa ny fonao fa tsy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra 'Andriamanitra.
8:22 Ary noho izany, mibebaka avy amin'izany, ny faharatsiana, ary mangataka an'Andriamanitra, ka angamba izany drafitry ny fonao mba ho voavela heloka anao.
8:23 Fa hitako anareo ho ao amin'ny ngidin 'ny afero sy ny fehin-keloka ihany. "
8:24 Ary Simona namaly tamin'ny hoe:, "Mivavaha ho ahy amin'ny Tompo, ka na inona na inona ny zavatra izay efa nolazainareo tamiko mety hitranga. "
8:25 ary tokoa, rehefa avy nanambara sy nilaza ny Tenin'ny Tompo, dia niverina ho any Jerosalema, ary izy ireo Evanjely tsy ny faritra maro izay an'ny Samaritana.
8:26 Ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'i Filipo, nanao hoe:, "Mitsangàna, ka mandehana mianatsimo, ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema izay any Gaza, izay misy efitra. "
8:27 Ary nitsangana, dia lasa. Ary indro, ny lehilahy Etiopiana, tandapa, mahery eo ambany Candace, ny mpanjakavavin'ny Etiopiana, izay, no mpifehy ny zava-tsarobidiny rehetra, efa tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka.
8:28 Ary raha niverina, dia nipetraka teo amin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'Isaia mpaminany.
8:29 Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo, "Manakaikeza ka mankanesa amin'io kalesy io."
8:30 ary Filipo, haingana, nandre azy namaky teny tao amin'Isaia mpaminany, ka hoy Izy:, "Heverinareo ve fa mahatakatra ny zavatra va izay vakinao?"
8:31 Ary hoy izy:, "Fa ahoana no ahafahako, raha tsy misy, dia efa nilaza izany tamiko?"Ary izy nangataka an'i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy.
8:32 Ary ny toerana ao amin'ny Soratra Masina fa izy no namaky izany: "Toy ny ondry dia entina hovonoina. Ary toy ny zanak'ondry moana eo anoloan'ny mpanety azy, ka tsy niloa-bava.
8:33 Dia niaritra ny didim-pitsarany amin'ny fanetren-tena. Iza ny taranaka momba ny fomba ny ainy nesorina tsy ho amin'ny tany?"
8:34 Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo, nanao hoe:: "Miangavy anao aho, momba izay manam-mpaminany hoe: ity? momba ny tenany, sa olon-kafa?"
8:35 Ary Filipo, Manokatra ny vavany dia nanomboka teo amin'izany Soratra Masina, Evanjely tsy Jesosy taminy.
8:36 Ary raha mbola nandeha teny an-dalana, dia tonga teo amin'izay nisy rano loharano. Ary hoy ilay tandapa:: "Misy rano. Inona no misakana ahy tsy hatao batisa?"
8:37 Dia hoy Filipo, "Raha mino amin'ny fonao manontolo, dia navela. "Dia namaly tamin'ny hoe:, "Mino aho fa ny Zanak 'Andriamanitra ho an'i Jesosy Kristy."
8:38 Ary nomeny baiko ilay kalesy mijanona. Ary dia Filipo sy ilay tandapa nidina tao anaty rano. Dia nataony batisa izy.
8:39 Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano, ny Fanahin 'ny Tompo nitondra Filipo lasa, sy ilay tandapa, dia tsy hahita azy intsony. Avy eo izy dia nandeha teny an-dalana, faly.
8:40 Ary Filipo hita tany Azota tamin'ny. Ary nanohy tamin'ny, Evanjely tsy dia ny tanàna rehetra, mandra-tonga tany Kaisaria.